”Fadlan arrinta soo farageliya!” – Nin u hadlaya Kenya oo ka hadlay waxa dhici doona haddii Somalia badda loo xugmiyo 3 maalmood kaddib | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Fadlan arrinta soo farageliya!” – Nin u hadlaya Kenya oo ka hadlay...
”Fadlan arrinta soo farageliya!” – Nin u hadlaya Kenya oo ka hadlay waxa dhici doona haddii Somalia badda loo xugmiyo 3 maalmood kaddib
(Nairobi) 08 Okt 2021 – David Matsanga, Guddoonka Pan African Forum (PAF) isla markaana sheegta inuu yahay khabiir ku talax tegey xallinta khilaafaadka balse Kenya aad ugu xagliya, ayaa Xogahaya Guud ee QM, Antonio Guterres, ku boorriyey inuu soo farageliyo go’aanka Maxkamadda ICJ oo lagu wado inuu soo baxo 12-ka Oktoobar oo ay 3 beri inaga xigaan.
Matsanga ayaa sheegay in QM oo ay Maxkamaddani hoos tagtaa uu go’aankan hakin karo maadaama haddii uu xukunkani dhaco ay taasi horseedi karto xiisad hor leh oo gobolka ka dhacda, sida uu ku doodayo.
Somalia ayaa dacwaddan maxkamadda geeysey Agoosto 28, 2014-kii, kaddib markii ay Kenya u gembisey dhowr kulan oo lagu ballansanaa si looga wada hadlo heshiis is afgarad ahaa oo ay Somalia ku fududaatay 2009-kii, kaasoo muran geliyey dhul-badeed aad u ballaaran.
“Waxaannu la soconney xaaladda Somalia afartii sanadood ee tegey. Runtuna waxay tahay in tan iyo markii uu yimid MW Mohamed Farmaajo ay Somalia noqotay ka dar oo dibi dhal.” ayuu yiri Matsanga oo qaddiyadda dhan u ekeeynaya mid Farmaajo ku kooban.
Muqdisho ayaa ku doodaysa in ay dooddeedu waafaqayso Xeerka Article 15 ee Convention of the Law of Sea oo la qaatay 1982-kii, balse Kenya oo wadda ku ”qabso ku qadi mayside” ayaa sheeganaysa inay iyadu dhul-badeedkan ka talinaysey waqtigaa kahor.
Previous articleFilm-kii abid ugu horreeyey ee Soomaali ah oo u sharraxan Academy Award caalami ah
Next articleRASMI: Kenya oo si toos ah u shaacisay inaysan ixtiraami doonin go’aanka ICJ